'मेरो नामजस्तै शालीन छैन म' (भिडिओ) :: Setopati
'मेरो नामजस्तै शालीन छैन म' (भिडिओ)
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, चैत १४
गत माघ महिनाको महिला मार्चमा सपना सञ्जिवनीले सीतालाई विम्ब बनाएर मैथिलीमा कविता भनिन्, 'हम अब सीता नही बनबौं।'
उनको यो कविताले ठूलो तरंग ल्यायो। उनले कवितामार्फत् महिलाको पुरानो विम्बलाई चुनाैती दिनु यो तरंग उठ्नुको कारण थियो। आन्दोलन मोर्चामा होस् वा कला क्षेत्रमा, अचेल महिलाहरू परम्परागत 'छवि' भत्काउने अभ्यासमा छन्।
स्ट्यान्ड अप कमेडियन सीता न्यौपाने यसको पछिल्लो उदाहरण बनेकी छन्।
'नेपग्याज्म कमेडी'मा आफ्नो जीवनकै पहिलो प्रस्तुति दिएकी सीताले आफ्नो प्रस्तुति यसरी सुरू गरेकी छन्- नमस्कार मेरो नाम सीता। घर चितवन। म मेरो नामजस्तै शालीन छैन भाइ!
उनको यो प्रस्तुतिमा यस्ता धेरै पन्च लाइन छन् जसले महिलाको पुरानाे 'शालीन', 'भद्र' र 'त्यागी' छविलाई चुनौती दिन्छ। यही विशेषताले एक हप्ताअघि सार्वजनिक उनले प्रस्तुति दिएको भिडिओ छोटो समयमै दुई लाख भ्युज कट्न सफल भएको छ।
उनको प्रस्तुतिको शीर्षक छ, 'के हेरेको बे?'
२५ वर्षीया सीताको यो पहिलो प्रस्तुति हो। यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्न सेतोपाटी आएकी उनले यो आफ्नो जीवनकै पहिलो अन्तर्वार्ता भएको बताइन्।
माइक्रो बायोलोजीमा एमएससी पढेकी उनी हाल थेसिस लेख्दै छिन्।
साथीसंगीलाई जोक सुनाउँदा रमाउने स्वभावकी सीता युट्युबमा आउने स्ट्यान्ड अप कमेडी शो खुब हेर्थिन्। त्यसरी हेर्दाहेर्दै आफूले पनि प्रयास गरे गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पलाएकाले प्रयास गरेको बताउँछिन्।
'मेरो कुरा गर्ने शैलीले साथीहरू खुब हाँस्थे। उनीहरूको प्रतिक्रियाले ममा केही क्षमता पक्कै छ भन्नेमा ढुक्क थिएँ,' उनले भनिन्, 'मैले पनि त्यो स्टेजमा प्रस्तुति दिएँ भने साथीहरूजस्तै दर्शक-स्रोता पनि हाँस्नु हुन्छ होला भन्ने सोच्थेँ। त्यसैले एक पटक भए पनि प्रयास गर्नैपर्छ भन्दै आफूलाई घचघचाएर यहाँसम्म आइपुगेँ।'
तीन वर्षअघि 'नेपग्याज्म कमेडी' सुरू भयो। सीताले यसबारे दुई वर्षअघि थाहा पाइन्। त्यसपछि आफ्नो सोचलाई मूर्त रूप दिन स्क्रिप्ट लेख्न थालिन्। अनि जन्मियो, 'के हेरेको बे?'
स्ट्यान्ड अप कमेडीमा युवा पुस्ताले आफ्नै भोगाइ र समसामयिक विषयलाई रमाइलो शैलीमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
सीताको 'के हेरेको बे?' घर-समाजका मसिना विषयमाथिको व्यंग्य हो।
'मलाई साना तर बेवास्ता गरिएका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्न मन पर्छ। यहाँ पनि त्यही प्रयास गरेकी हुँ,' उनले भनिन्।
गम्भीर सामाजिक वा राजनीतिक मुद्दामा उनी धेरै बोल्दिनन्। आफ्नो प्रस्तुतिमा दर्शक-स्रोतालाई रमाइलो गराउँदै छोरी मान्छे भएर आफैंले भोगेका तीतामीठा सन्दर्भ अटाएकी छन्।
सीताको बोलीमा नियन्त्रण र प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास झल्किन्छ।
'म बाहिर जे हुँ, स्टेजमा पनि त्यसरी नै प्रस्तुत भएकी छु,' उनले भनिन्।
सीता साँच्चैको कस्ती छिन् त?
हाँस्दै भनिन्, 'त्यै, के हेरेको बे टाइपको।'
यो नै उनको मौलिक स्वभाव हो। आफ्नो मौलिक शैलीमा प्रस्तुति दिएकाले नै स्रोता-दर्शकले मन पराएका अनुमान उनी लगाउँछिन्। सीताका अनुसार उनलाई महिला, पुरूष र सबै उमेर समूहले प्रशंसा गरिरहेका छन्। तीमध्ये धेरैले भनेका छन्, 'केटी भएर पनि कस्तो बोल्ड, कस्तो आत्मविश्वासी!'
आफूले पाएका प्रतिक्रियाबाट उनी खुसी हुने नै भइन्। तर 'केटी भएर पनि यस्तो बोल्ड!' भन्ने खालको टिप्पणी उनलाई चित्त बुझेको छैन।
'धेरै महिला बोल्न चाहन्छन्। आफ्नो प्रतिभा देखाउन चाहन्छन्। तर घर र समाजका मान्छेले विभिन्न बहानामा बढी नबोल् भनिरहेका हुन्छन्,' उनले भनिन्, 'बोल्न त पाउनुपर्‍यो नि!'
अरूले जे भने पनि आफूलाई लागेको कुरा गर्न आफैं अघि सरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने उनको मत छ।
'के हेरेको बे?' बाट उनले आफूलाई प्रमाणित गरेको आभास तब भयो जब आफ्नो घर चितवनका गाउँलेले उनलाई फोन र सामाजिक सञ्जालबाट प्रशंसा गरे।
सीताका अनुसार चितवनमा नेपग्याज्म कमेडीको ठूलो 'क्रेज' छ। यसको प्रमाण पेश गर्दै उनले भनिन्, 'चितवनको आफ्नै स्वाग छ। मेरो प्रस्तुति नेपाल र विदेशका स्रोता दर्शकले समेत मन पराउनुभएको छ। तर चितवनवासीबाट मैले विशेष माया पाइरहेको छु।'
सीताको भिडिओमा हालसम्म झन्डै एक हजार कमेन्ट आइसकेका छन्। लगभग सबैले उनको प्रस्तुतिलाई सराहना गरेका छन्। उनले भनिन्, 'यो मैले कल्पना नै नगरेको सफलता र माया हो।'
पहिलो प्रस्तुतिमा नयाँ हुनु सीताका लागि सुविधासरह थियो। जे गरे पनि नयाँ देखिन्थ्यो-सुनिन्थ्यो। तर अब उनले यसपछिका प्रस्तुतिमा आफूप्रति दर्शकको अपेक्षा बढ्ने महसुस गर्न थालिसकेकी छन्।
उनले भनिन्, 'दर्शक-स्रोताको मायाले हौसला दिएको छ। तर दबाब पनि बढाउने रहेछ। आगामी दिनमा अझ राम्रो गरेर देखाउने चुनाैती थपिएको छ।'
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १४, २०७७, १८:४२:००